Bonneville International Market manager Carl Gardner hisotro ronono | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Bonneville International Market manager Carl Gardner hisotro ronono
Ilay mpiandraikitra ny tsenan'i San Francisco, Bonneville International ary ny filoha lefitra senior Carl Gardner dia nanambara ny fisotroan-dronono tamin'ny faran'ny volana Aogositra.
"I Carl dia fananana lehibe an'i Bonneville," hoy i Darrell Brown, filohan'ny Bonneville International. "Hahatsapa ny fitarihany, ny traikefa lalina ary ny fisakaizany isika."
Gardner dia nanomboka ny sehatry ny haino aman-jery 43 taona tao Seattle talohan'ny nanarahana lalana mankany Denver, Portland, ary Milwaukee.
Talohan'ny nidirany tao Bonneville tamin'ny 2008, 17 taona i Gardner niara-niasa tamin'ny Journal Communications. Tao amin'ny Journal dia nihazona andraikitra mavitrika zokiolona sy tompon'andraikitra lehibe amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra an'ny orinasa, ny orinasam-pifandraisana nomerika ary ny vondrona teknolojia. Niverina tany Seattle ho tompon'antoka tsenan'ny Bonneville tamin'ny taona 2008 izy ary nifindra tany San Francisco rehefa niditra tao amin'ny tsena tamin'ny taona 2017 i Bonneville.
Gardner dia lasa filohan'ny NAB Radio Board ary mpikambana taloha tao amin'ny Komity Mpanatanteraka NAB. Izy dia nanompo ny indostrian'ny fampielezam-peo amin'ny sehatra isan-karazany, ao anatin'izany ny maha-mpikambana ny Radio Advertising Board of Directors, ny Associated Press Advisory Board, ary ny Washington State Association of Broadcasters board.
Hanambara ny mpandimby an'i Gardner ny Bonneville International amin'ity volana ity.
Momba ny Bonneville International Corporation
Bonneville International dia fampielezana lova natokana hananganana, hifandraisana, fampahafantarana ary fankalazana ireo fianakaviana sy vondron'olona. Niorina tamin'ny 1964, i Bonneville dia mandeha amin'ny onjam-peo 22 sy televiziona iray. Niorina tao amin'ny tanànan'i Salt Lake City i Bonneville dia subsidiary iray avy amin'ny Deseret Management Corporation, sandry an'ny The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Bonneville International, tsidiho azafady www.bonneville.com.
Previous: Bridge Digital dia mahatsapa vahaolana vaovao fanodinana 4K HEVC vaovao miaraka amin'ny AJA KONA 5